Isiseko seKhosi yoYilo kusetyenziswa iRevit -Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Isiseko sekhosi yoYilo sisebenzisa uHlaziyo
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nohlaziyo lwendalo yokwakha iprojekthi
Kule khosi siza kugxila kukunika ezona ndlela zisebenzayo zokufunda izixhobo zeRevit yemodeli yezakhiwo kwinqanaba lobuchule nakwixesha elifutshane kakhulu. Siza kusebenzisa ulwimi olulula nolulula ukuluqonda ukuba luthathe kwiziseko ukuya kubunzulu bokusetyenziswa kwale nkqubo inkulu.
Isizathu sokwenyani sokufunda Revit kukusebenzisa itekhnoloji yeBIM. Ngaphandle koko, iya kuba yinkqubo kuphela yokuzoba izakhiwo. Kodwa njengoko uza kubona ekhosini, zininzi ngakumbi izinto ezingemva kwale nkqubo enamandla. Siza kugxininisa kulawulo lolwazi.
Ngokungafaniyo nezinye iikhosi ezinqunyelwe kuphela ekuboniseni ukusetyenziswa kwezixhobo, siya kukunika iingcebiso eziya kukunceda usebenzise indlela ye-BIM kwiprojekthi yakho.
I-BIM ividiyo darliklarini sotib olish